समाचार - मलाई उच्च माइलेज तेल आवश्यक छ?
बुढो हुनु जीवनको एक हिस्सा हो। वर्ष बित्दै जाँदा, हामीलाई टिक बनाउने भागहरूले काम गरेनन् जुन उनीहरूले एकपटक गरे। कारहरू उही तरीकाले छन्। तिनीहरू तल झर्छन्, र अधिक माईलको साथ पुराना सवारीहरूलाई चीजहरूलाई सुचारु रूपमा चलाउनको लागि केही अतिरिक्त बढावा चाहिन्छ। त्यस्तै ठाउँमा उच्च माइलेज तेल आउँछ!
जसरी तपाई पछि जिन्दगीमा स्वस्थ रहनको लागि कदम चाल्न सक्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो कारलाई माईल माइलेज तेल दिन सक्नुहुन्छ जुन बुढो उमेरसँग सम्बन्धित छ र लगाउन रोक्न सक्नुहुन्छ। तर कहिले थाहा हुन्छ कि कहिले यसलाई प्रयोग गर्ने समय भयो? Vehicles 75,००० माईल वा अधिकका सवारी साधनहरूका लागि अहिले समय आउन सक्छ।
त्यसो भए उच्च माइलेज तेल के हो?
नामले सlies्केत गर्यो भने यस प्रकारको मोटर तेल उच्च माईल गाडीहरू वा ,000 75,००० माईलभन्दा बढीमा भएका विशिष्ट समस्याहरूको समाधान गर्न तयार पारिएको हो। यसले तेलको खपत, धुम्रपान, र पुराना इञ्जिनहरूबाट उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्दछ। उच्च माइलेज तेल लीक र तेल सीपेज कम गर्न पनि काम गर्दछ।
जब तपाईले कुनै सानो कारमा उच्च माइलेज तेल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न यो चोट नपुर्‍याईकन, उच्च माइलेज तेल ठेगानाहरू प्रायः vehicles vehicles,००० माईल भन्दा कमको सवारीमा देखा पर्दैन।
कसरी उच्च माइलेज तेल काम गर्दछ?
उच्च माइलेज तेल एक शक्तिशाली मल्टिभिटमिनको रूपमा काम गर्दछ, पहिरिएको इञ्जिन भागहरू पुन: भण्डारण गर्दछ र थप लगाउन र च्यात्छ।
उच्च माईल तेल भित्र रहेको मोहर कन्डिशनरहरू विस्तार भए र सीलहरू पुन: सजीव पार्दै गएमा कम तेल तपाईंको इन्जिनबाट बाहिर निस्कन्छ। यसले कम तेल खपतमा परिणाम दिन्छ, जसको मतलब कम तेल परिवर्तन हुन्छ र सडकमा कम इञ्जिन समस्याहरू हुन्छ।
उच्च माइलेज तेलमा पनि विभिन्न एन्टिआक्सिडन्टहरू, डिटर्जन्टहरू, र थप्ने र घर्षण कम गर्न additives contain ती सबै चीजहरू जुन तिनीहरूको प्राइम बमोजिमका इञ्जिनहरूका लागि फाइदाजनक हुन्छन्। यी अवयवहरूले ग्रिम र स्लजलाई सफा गर्दछन् जुन प्राकृतिक रूपमा समयको साथसाथै निर्माण हुन्छ, साथसाथै घर्षणलाई कम गर्दै जबकि तपाईंको ईन्जिन बिरालोको बच्चा जस्ता हुन्छ।
कसलाई उच्च माइलेज तेल चाहिन्छ?
तिनीहरूको ओडोमिटरमा ,000 with,००० भन्दा बढि कारहरू सामान्यतया उच्च माइलेज तेलबाट फाइदा लिन सक्दछन्। थोरै माईलको साथ पुराना सवारी साधनहरूले पनि फाइदा लिन सक्दछन्, किनकि ईन्जिन सिलहरू माइलेजको परवाह नगरी समय बित्दै जान्छ। डिग्रेड गरिएको सिलको अर्थ तेल चुहिन, र तेल चुहिनको मतलब तपाईंको इञ्जिनले राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन।
तपाईले उच्च माइलेज तेलमा स्विच गर्न चाहानु सक्नुहुन्छ यदि:
§ तपाईं ग्यारेज बाहिर आफ्नो कार फिर्ता र आफ्नो कार पार्क भएको भूमिमा तेल दाग पाउनुभयो। तेल ड्रिप्स इञ्जिन भागहरु को एक ढीला संकेत गर्न सक्छ।
§ तपाईं हुड मुनि हेर्नुहोस् र कम इन्जिन भागहरूमा तेल लाइनहरु देख्नुहुन्छ।
§ तपाईंको ईन्जिन सामान्य भन्दा ठुलो लाग्दछ। एक चर्को आवाजले संकेत गर्दछ कि तपाईंको ईन्जिनले डेन्सर मोटर तेलबाट फाइदा लिन सक्छ, जस्तै, उच्च माइलेज तेल।
यदि तपाईं लामो समयको लागि आफ्नो वाहनको संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भने, नियमित रूपमा अनुसूचित रोकथाम मर्मत सेवाहरूमा रहनुहोस्, विशेष गरी उच्च माइलेज तेलको साथ तेल परिवर्तन।
कसरी मेरो इञ्जिनले उच्च माइलेज तेलबाट फाइदा लिन सक्छ?
उच्च माइलेज तेलले तपाईंको ईन्जिनमा विशिष्ट कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्दछ जुन बुढेसकालसँग सम्बन्धित छ। यो अधिक प्रयोग गरिएको इञ्जिन भागहरूको लागि उपचार मलम जस्तै हो।
Oil कम खपत गरिएको तेल खपत: उच्च माईल गाडीहरू अपमानजनक ईन्जिन सिलका कारण जवान कारहरूको तुलनामा बढी तेल चुहिएर जलाउँदछन्। उच्च माइलेज तेलले गिरावट भएको छापहरूलाई पुन: जीवन प्रदान गर्दछ, जसले कम तेल खपत र बर्नऑफ निम्त्याउँछ।
Engine कम इञ्जिन स्लज: पुराना इञ्जिनहरूले अन्य मोटर तेलहरू द्वारा पछाडि छोडेर हिलोमा जम्मा हुन्छन्। उच्च माइलेज तेल टुक्रिन्छ र अवशिष्ट गाढा विघटन गर्दछ।
Damage क्षतिबाट सुरक्षा: उच्च माईल गाडीहरू सामान्य कार लगाउँदछन् र कान्छी कारहरू भन्दा अश्रु गर्दछन्। उच्च माइलेज तेलको additives तपाईंको सम्पूर्ण इन्जिन संरक्षण र रक्षा गर्दछ।
म मेरो उच्च माइलेज तेल परिवर्तनको लागि तयार छु!
तपाईंको गाडीमा कति (वा कति) मीलहरू छन्, नियमित रूपमा अनुसूचित तेल परिवर्तन तपाईंको कार नयाँ, लामो राख्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ। जब तपाईं नजिकैको फायरस्टोन कम्प्युट अटो केयरमा तपाईंको अर्को तेल परिवर्तनको लागि अग्रसर हुनुहुन्छ, आफ्नो टेक्नीशियनलाई उच्च माइलेज तेल परिवर्तनको बारेमा सोध्नुहोस्, विशेष गरी यदि तपाईंले आफ्नो ड्राईवेवेमा तेलको दाग देख्नुभयो वा सुन्नुभयो भने इञ्जिन र्याटलिंग। एक उच्च माईल तेल परिवर्तनले तपाईंको कारलाई यसको अर्को ठूलो माइलस्टोनमा हिट गर्न मद्दत गर्दछ!
सिलिंग पार्ट, सिलिकॉन रबर सील, गाडी सहायक, तेल नाली, स्पेयर पार्ट्स, आर्म बुशिंग नियन्त्रण गर्नुहोस्,